Tunisia 0-1 Mali: Mali Oo Guul Gaartay Xili Garsooraha Uu Dhameeyay Ciyaarta Goor Hore
[ January 26, 2022 ] Morocco 2-1 Malawi: Hakimi oo Xulkiisa u diray wareega sideed dhamaadka ee Koobka AFCON	Wararka Ciyaaraha
[ January 26, 2022 ] Senegal 2-0 Cape Verde: Mane oo gool u dhaliyay Xulkiisa oo iska Xaadiriyay Sideed dhamaadka	Wararka Ciyaaraha
[ January 26, 2022 ] Wenger oo Cadeeyay in Kooxda PSG ay lumineyso Mbappe	Suuqa kala iibsiga
[ January 26, 2022 ] De Bruyne oo Fariin Digniin ah u diray Xidigaha kooxdiisa Manchester City	Wararka Ciyaaraha
[ January 26, 2022 ] Klopp oo u dagaalamaya inuu sii haysto Xidiga Gomez Xagaagan	Wararka Ciyaaraha
HomeWararka CiyaarahaTunisia 0-1 Mali: Mali oo guul gaartay Xili Garsooraha uu dhameeyay ciyaarta Goor hore
January 13, 2022 Wararka Ciyaaraha, Koobabka Qaramada 0
Wahbi Khazri ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta laga badbaadiyay rigoore iyadoo Tunisia ay guuldaro 1-0 ah kala kulantay Mali kulanki furitaanka koobka qaramada Africa oo uu dhex dhexaad ka ahaa garsoore Janny Sikazwe.
Sikazwe ayaa ku abaal mariyay labada kooxood rigoore qeybtii labaad ee ciyaarta, waxaana uu ka saaray weeraryahanka Mali El Bilal Toure isagoo dhameeyay ciyaarta waqti hore kulan ka dhacay garoonka Stade Limbe.
Ciyaartan oo ay 1-0 ku badisay Mali ayaa laba jeer la joojiyey ka hor intii aanay gaadhin waqtiga dhamaadka. Garsooraha reer Zambia ee Janny Sikazwe ayaa ciyaarta joojiyey daqiiqaddii 85aad isaga oo yeedhiyey siidhiga dhamaadka. Ciyaartoyda iyo tababareyaasha iyo xataa dadkii ka daawanayay telefishanada iyo intii joogtay garoonka ayaa amakaaga qaaday.
Lama garanayo sababta Janny Sikazwe u joojiyey ciyaarta ee uu siidhiga dhamaadka u yeedhiyey, hase yeeshee waxay wada-hadleen garsooraha afraad, kaddibna dib ayaa loo bilaabay ciyaarta.
Arrin kale oo layaab leh ayaa haddana dhacday. Garsoore Janny Sikazwe ayaa afuufay ama yeedhiyey siidhiga dhamaadka iyadoo ciyaartu marayso 89 daqiiqadood iyo 43 ilbidhiqsi, taas oo ka dhigan in xataa aanay dhamaanin 90kii daqiiqadood ee caadiga ahaa, iska dhaaf in lagu daro waqtigii lumay oo ugu yaraan laba daqiiqadood noqon lahaa.
Si kastaba oo ay ciyaartu ahaato waxa farxad u dabbaal-degay Mali oo guul ku fartay kulankooda koowaad ee AFCON, waxaana saddexda dhibcood siiyey Ibrahima Kone oo rikoodhe u dhaliyey qaybtii hore.
Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Joe Gomez, Adama Traore, Christian Eriksen, Eric Bailly, Armando Broja, Luis Diaz, Bernd Leno
Wararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Gomez, Diaz, Lingard, Isak, Traore, De Jong
Ciyaaro.com Riix Halkan Ku Laabo Qeybta Hore
Morocco 2-1 Malawi: Hakimi oo Xulkiisa u diray wareega sideed dhamaadka ee Koobka AFCON
Senegal 2-0 Cape Verde: Mane oo gool u dhaliyay Xulkiisa oo iska Xaadiriyay Sideed dhamaadka
Wenger oo Cadeeyay in Kooxda PSG ay lumineyso Mbappe
De Bruyne oo Fariin Digniin ah u diray Xidigaha kooxdiisa Manchester City
Klopp oo u dagaalamaya inuu sii haysto Xidiga Gomez Xagaagan
Wolverhampton Wanderers oo ka mid ah kooxaha Premier League ee doonaya inay dalab ka gudbiyaan Joao Palhinha.
Wakiilka Alvaro Morata oo meesha ka saaray inuu u dhaqaaqayo Barcelona.
Amadou Haidara:”ma doonayo inuu ku biiro Manchester United bishaan”‘
Ansu Fati oo ka tirsan kooxda Barcelona ayaa markale garoomada ka maqnaan doona.
Denis Zakaria oo lasheegay inuu beeciisu ku kacayo wax ka yar £6m.
Chelsea oo xiriir la sameysay daafaca Bayern Munich Niklas Sule.
Arsenal oo ka fiirsaneysa inay amaah ku qaadato Luka Jovic.
Tottenham Hotspur oo isku diyaarineysa inay dalab ka gudbiso Wolves Adama Traore.
Barcelona oo wadahadalo kula jirta Cesar Azpilicueta
Juventus oo ku biirtay tartanka loogu jiro ciyaaryahanka khadka dhexe ee Barcelona Frenkie de Jong
Manchester United oo la xiriirtay wakiilka Xidiga Boubacar Kamara heshiis 10 milyan ginni ah.
Manchester City oo bartilmaameedsanaysa weeraryahanka Julian Alvarez ee Kooxda River Plate
Adebayor oo Arsenal ku weeraray Kiiska Aubameyang – “Weligood ma garanayaan sida Wax loo cafiyo”